တိုကျိုရှိ Virtual ရုံး
တတ်နိုင် Virtual ရုံး in တိုကျို သင့်ရဲ့အဘို့ virtual ရုံးလိပ်စာ တိုကျိုမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကို virtual လိပ်စာ တိုကျိုမှာ virtual ရုံးခန်း တိုကျိုမှာ အွန်လိုင်းရုံး တိုကျိုမှာ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာ တိုကျိုကနေတိုကျိုမှာ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးတယ် ကို virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုပေး ဂျပန်မှာ။
Virtual ရုံး ဂျပန် | Virtual ရုံးလိပ်စာ ဂျပန် | စီးပွားရေးအတွက်စကားဝှက်လိပ်စာ ဂျပန် | Virtual ရုံးခန်း ဂျပန် | အွန်လိုင်း Virtual ရုံး ဂျပန် | virtual စီးပွားရေးလိပ်စာ ဂျပန် | Virtual Workspace ဂျပန်မှာ။
တိုကျိုသည်နိုင်ငံတကာငွေကြေးဆိုင်ရာဗဟိုဌာနတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်များနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအာမခံကုမ္ပဏီများ၏ရုံးချုပ်ကိုကုမ္ပဏီများနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အီလက်ထရွန်နစ်နှင့်အသံလွှင့်လုပ်ငန်းများတွင်အချက်အချာနေရာအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ မြို့တော်ကို ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကနိုင်ငံတကာဘဏ္financialာရေးဌာနအဖြစ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအတွက်“ command centre” (၃) ခုအနက်မှတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ တိုကျိုသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၅ ခုမြောက်အပြိုင်အဆိုင်အများဆုံးဘဏ္centerာရေးစင်တာနှင့်အာရှတွင်ယှဉ်ပြိုင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ တိုကျိုစတော့အိတ်ချိန်းသည်ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံးစတော့အိတ်ချိန်းဖြစ်ပြီးဈေးကွက်အရင်းအနှီးအားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်တတိယအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးရှယ်ယာလည်ပတ်မှုဖြင့်စတုတ္ထအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
Virtual Office ဆိုသည်မှာနည်းပညာအခြေပြုရုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်ဤဝန်းကျင်တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုတွေ့ဆုံရန်မလိုဘဲအတူတကွအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ Virtual Office ၏ ၀ န်ထမ်းများသည်အင်တာနက်နှင့်အသံများ၊ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုစွမ်းရည်များရှိသောကွန်ပျူတာများမှပုံမှန်ဆက်သွယ်မှုများပြုလုပ်သည်။ တိုကျို၏ virtual ရုံးသည်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဆိုအားသာချက်များစွာရှိသည်။ Virtual Office ၏အားသာချက်များသည်နည်းပညာနှင့်သင်၏စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်အတွက်မည်သို့အသုံးပြုရမည်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အဝေးမှလည်ပတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအသင်းကိုတည်ဆောက်ရန်နိုင်ငံတကာတွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းရည်ကိုရရှိနိုင်သည်။ သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အမြင်ကိုမျှဝေခံစားရန်နှင့်အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးစွမ်းရည်အားလုံးကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ပိုကောင်းတဲ့သတင်းကတော့ virtual office တစ်ခုဖြစ်ပြီးနည်းပညာဖြင့်မောင်းနှင်သည်။
တိုကျိုရှိရုံးခန်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများအတွက်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်။ virtual office သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး၎င်းအတွက်စီးပွားရေးအတွက်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် ၀ န်ထမ်းများစွာသည်၎င်းတို့ကိုပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးသောကြောင့်အဝေးမှအလုပ်လုပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ တိုကျိုရှိ Virtual ရုံးခန်းတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အလုပ်သို့ခရီးသွားနေစဉ်လူတိုင်းလမ်းပေါ်ရှိအချိန်ကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်အချိန်နှင့်ခွန်အားကိုသက်သာစေသည်။ ဘာလဲ
တိုကျိုတွင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်တိုကျိုရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တိုကျိုရှိ virtual ရုံးသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအားငှားရမ်းခြင်းနှင့်နေရာတစ်ခုတွင်ငှားရမ်းခြင်းမပြုရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ တိုကျိုရှိ Virtual Office သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးတိုကျိုရှိသင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ virtual office သည်တိုကျိုသည်တိုကျိုရှိရိုးရာရုံးခန်းထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အတော်များများသည်တိုကျိုမြို့ရှိဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်စီးပွားရေးလိပ်စာကိုသင်ပေးဆောင်ရသည့်အတိုင်းကြီးမားသောငှားရမ်းခများကိုမပေးဆောင်ဘဲတိုကျိုမြို့ရှိ virtual office တစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြသည်။ Virtual Office Tokyo သည်သင့်အားစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုနည်းစေနိုင်သည်။ Virtual ရုံးနေရာကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်တိုကျိုသည်တိုကျိုမြို့ရှိ virtual office အနေဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောရုံးခန်းသို့ပြောင်းစရာမလိုဘဲချဲ့ထွင်နိုင်လိမ့်မည်။ Tokyo Virtual ရုံးသည်တိုကျိုမြို့ရှိရိုးရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောအခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာလိမ့်မည်ဟုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် virtual office လိပ်စာရှိသည့်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာတိုကျိုသည်သင်၏ package နှင့်စာတိုက်မေးလ်များကိုတိုကျိုရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရွှေ့ပြောင်း။ ရနိုင်ပြီးတိုကျိုရှိ virtual ရုံးများ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာထိုအရာမဟုတ်ပါ။ တိုကျိုမြို့တွင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Tokyo virtual office သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုသင်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
တိုကျိုရှိ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာကဘာကိုကမ်းလှမ်းသနည်း။
တစ်ဦးရှိခြင်းသည် တိုကျိုရှိ virtual ရုံး တိုကျိုမြို့ရှိစီးပွားရေးအတွက်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးနေရာများရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တိုကျိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိပ်စာဟုလည်းလူသိများသောတိုကျို၏ virtual office သည်တိုကျိုမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအားငှားရမ်းခြင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သို့မဟုတ်တည်နေရာအတွက်စျေးကြီးသောငှားရမ်းခမပေးရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ တိုကျိုရှိ Virtual Office သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးတိုကျိုမြို့ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သင့်တော်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် virtual office တိုကျိုသည်တိုကျိုရှိရိုးရာရုံးခန်းထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစွာသည်တိုကျိုရှိဂုဏ်သိက္ခာရှိသောစီးပွားရေးလိပ်စာအတွက်ပေးဆပ်စရာမလိုသည့်အတွက်ကြီးမားသောငှားရမ်းခကိုမပေးဘဲသင်သည်ဂျပန်ရုံးခန်းတစ်ခန်းကို ၀ င်ရောက်ရွေးချယ်သည်။ Virtual Office Tokyo သည်သင့်အားစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုနည်းစေနိုင်သည်။ Virtual ရုံးနေရာကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်တိုကျိုသည်တိုကျိုမြို့ရှိ virtual office အနေဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောရုံးခန်းသို့ပြောင်းစရာမလိုဘဲချဲ့ထွင်နိုင်လိမ့်မည်။ Tokyo Virtual ရုံးသည်တိုကျိုမြို့ရှိရိုးရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောအခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာလိမ့်မည်ဟုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ တိုကျိုရှိ virtual ရုံးလိပ်စာရှိခြင်း၏အရေးကြီးဆုံးအရာမှာသင်သည်တိုကျိုရှိသင်၏ရုံးနေရာသို့မဟုတ်တိုကျိုရှိ workspace ၌ရှိသကဲ့သို့တိုကျိုရှိ workspace သို့မဟုတ်တိုကျိုရှိရုံးနေရာများကဲ့သို့သင်၏လက်ခံရရှိမှုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ တိုကျိုရှိစာတိုက်မေးလ်များ၊ ဘယ်နေရာကိုမဆိုပြောင်းရွှေ့စရာမလိုဘဲ၊ သင်၏အွန်လိုင်းအွန်လိုင်းရုံးကိုဖွင့်လှစ်ထားသောကြောင့်လူအများအပြားတို့သည်တိုကျိုရှိရုံးခန်းများလိုအပ်သည်။ တိုကျိုမြို့တွင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းသည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Tokyo virtual office သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုသင်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
တိုကျိုရှိ Virtual Offices များသည်သင့်အားအပိုအားသာချက်များအနည်းငယ်ပေးသည်။
သင့်တော်သောနေရာတွင်သင်၏ Virtual Office Address ကိုသုံးစွဲသူများအပေါ်တည်မြဲသောစွဲမှတ်မှုဖြစ်စေသည်။
တိုကျိုရှိကုန်ကျစရိတ်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများမရှိဘဲသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုတိုကျိုရှိ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာကိုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုကျိုရှိရုံးခန်းသည်ယနေ့တွင်အပြည့်အ ၀ တည်ဆောက်ပြီးသင်၏စီးပွားရေးအတွက်ချက်ချင်းအဆင်သင့်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင်၏ Virtual Office ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ တိုကျိုမှာ
တိုကျိုအတွက် Cloud သိုလှောင်မှု
Virtual Office အတွက် Package၊ တိုကျို
တိုကျိုတွင်ပစ္စည်း ၂၀ ကျော်အတွက်အခကြေးငွေမရှိပါ
တိုကျို၌စာအိတ် ၁၀ စောင်အတွက်ကြေးမရှိပါ
ရက်ပေါင်း ၂၀ အထိတိုကျိုရှိစာတိုက်မေးလ်သိုလှောင်ခန်းကိုအခမဲ့
ဂျပန်၏ Virtual ရုံးနေရာအတွက်သင်၏ Virtual ရုံးတည်နေရာ
တိုကျိုရှိ Virtual Office အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Virtual ရုံးအတွက်အသုံးပြုခပိုယူသည် တိုကျိုမှာ
တိုကျိုရှိ Virtual Business Address နှင့်အခြားတည်နေရာများ -
ရယူ တိုကျိုရှိ virtual ရုံးအပေါငျးတို့သသာယာအဆင်ပြေမှုများ စျေးသက်သာစျေးနှုန်းမှာ
ကန့်သတ် တိုကျို, ဂျပန်များအတွက်ကို virtual ရုံးအသုံးပြုမှုအပေါ်။
တိုကျို၊ ဂျပန်တိုကျိုအတွက် Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါလူပုဂ္ဂိုလ် (သို့) ဂျပန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့တိုကျိုရှိကျွန်ုပ်တို့၏ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
တိုကျို၊ ဂျပန်တိုကျိုမြို့အတွက်ရုံးခန်း ၀ န်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
တိုကျို၊ ဂျပန်တိုကျိုမြို့ရှိ virtual ရုံးများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံမှသို့မဟုတ်ဂျပန်သို့ဖြစ်စေ၊
တိုကျို၊ ဂျပန်တိုကျိုအတွက် virtual address service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဂျပန်ဥပဒေအောက်တွင်အနက်ရောင်စာရင်းဝင်သည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အတွက်မပေးအပ်ပါ။
တိုကျို၊ ဂျပန်တိုကျိုအတွက်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ထားသောရုံးလိပ်စာအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုဂျပန်နိုင်ငံမှဖြစ်စေ၊ ဂျပန်သို့ဖြစ်စေ၊
တိုကျို၊ ဂျပန်တို့အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ဆောင်မှုများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်တိုကျိုမြို့ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင်ဖြေရှင်းနည်းများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများမဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်း (များ) ကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအဝင်နျူကလီးယားပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်နေသောဂျပန်။
တိုကျို၊ ဂျပန်တိုကျိုအတွက် virtual po box ၀ န်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များအသုံးပြုခြင်းကိုဖြစ်စေ၊
ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ရှိ virtual mailing address service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အငှားမိဘစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်သို့မဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံမှသို့မဟုတ်ဂျပန်သို့ဖြစ်စေ၊
တိုကျို၊ ဂျပန်တို့အတွက်ရုံးခန်းနေရာငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်ဂျပန်မှသို့မဟုတ်သို့ ၀ င်သောဘာသာရေးဂိုဏ်းများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမခံရပါ။
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ရုပ်ပုံအခြေခံသည့်ဂျပန်နိုင်ငံရှိလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်တိုကျို၊ ဂျပန်တို့အတွက်ရုံးခန်းများနှင့်စီးပွားရေးလိပ်စာများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးမထားပါ။
တိုကျို၊ ဂျပန်တိုိ့အတွက်အကောင်းဆုံး virtual လိပ်စာအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကို Pyramid အရောင်းတွင်လုပ်ကိုင်နေသောဂျပန်နိုင်ငံမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်ဂျပန်သို့သွားသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးမထားပါ။
တိုကျို၊ ဂျပန်တို့အတွက်ရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်းအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းပစ္စယများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောဂျပန်နိုင်ငံမှဖြစ်စေ၊
သင့်ရဲ့ virtual office ကို Japan မှာစျေးသက်သာစွာဖြင့်ရယူပါ။
virtual address ကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အရေးကြီးသောမှတ်စု တိုကျိုမှာ
virtual ရုံးမှန်ဆောင်မှုများ တိုကျိုမှာ
ကျနော်တို့စျေးသက်သာ ကို virtual ရုံးန်ဆောင်မှုများ in တိုကျိုအဖြစ်ကိုလည်းသိ ကို virtual စာတိုက်ပုံးန်ဆောင်မှုများ တိုကျိုမှာ virtual လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု တိုကျိုမှာ virtual ရုံးကုမ္ပဏီ တိုကျို စာပို့ဝန်ဆောင်မှု တိုကျိုမှာ ကို virtual ရုံးလိပ်စာဝန်ဆောင်မှု တိုကျိုမှာ ဒီဂျစ်တယ် Workspace န်ဆောင်မှု တိုကျိုမှာ စာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု တိုကျိုမှာ virtual ရုံးကုမ္ပဏီများသည် တိုကျိုမှာ, ငါတို့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဒီဂျစ်တယ် workspace ဖြေရှင်းချက် တိုကျို ကို virtual po box ကိုဝန်ဆောင်မှု တိုကျို ကို virtual mailing address ကိုဝန်ဆောင်မှု တိုကျို virtual ရုံးငှားရမ်းန်ဆောင်မှု တိုကျို ကို virtual ရုံးခန်းငှားရမ်းန်ဆောင်မှု တိုကျို, ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ကြသည် ကို virtual ရုံးန်ဆောင်မှုများ in ဂျပန်, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း, ကို virtual စာတိုက်ပုံးန်ဆောင်မှုများ ဂျပန်မှာ, virtual လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု ဂျပန်မှာ, ကို virtual ရုံးလိပ်စာဝန်ဆောင်မှု ဂျပန်မှာ, စာပို့ဝန်ဆောင်မှု ဂျပန်မှာ, ဒီဂျစ်တယ် Workspace န်ဆောင်မှု ဂျပန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဒီဂျစ်တယ် workspace ဖြေရှင်းချက် ဂျပန်မှာ, စာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု ဂျပန်မှာ, ကို virtual PO box ကိုဝန်ဆောင်မှု ဂျပန်မှာ, ကို virtual mailing address ကိုဝန်ဆောင်မှု ဂျပန်မှာ, virtual ရုံးကုမ္ပဏီ ဂျပန်မှာ, virtual ရုံးငှားရမ်းန်ဆောင်မှု ဂျပန်မှာ, virtual ရုံးကုမ္ပဏီများသည် ဂျပန်မှာ, ကို virtual ရုံးခန်းငှားရမ်းန်ဆောင်မှု ဂျပန်မှာ။ အဖြစ် ကို virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုပေး တိုကျိုမှာ
Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ ဂျပန် | Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ တိုကျိုမှာ
ပို၍ ထူးခြားသည် တိုကျိုမြို့ရှိစီးပွားရေးဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများ
တိုကျိုရှိသင်၏စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုအတွက်တိုကျိုစျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်အောင်မြင်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ တိုကျိုစျေးကွက်များသို့ရောက်ရှိရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းမှာတိုကျိုရှိအခွန်နှုန်းထားများကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုကျိုမြို့ရှိကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ တိုကျိုတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တိုကျိုရှိတင်သွင်းခြင်း / တင်ပို့ခြင်း၊ တိုကျိုသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ တိုကျိုရှိအိမ်ခြံမြေများ၊ တိုကျိုရှိထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်နှင့်တိုကျိုမြို့ရှိ HR Consulting တို့၏ကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့၏အကူအညီဖြင့်တိုကျိုတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း
NetherLands နှင့် US အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီ၏အထောက်အပံ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်။ တိုကျိုရှိတိုကျိုမြို့ရှိကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်း စင်ပေါ်ကုမ္ပဏီ တိုကျိုဒါမှမဟုတ်အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းတိုကျိုမြို့တွင်တိုကျို၌တည်ထောင်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာအိုမင်းခြင်းအတွက်စင်ပေါ်တင်ခဲ့သည်။ (နိုင်ငံတကာအလေ့အကျင့်) ။ စီးပွားရေးမရှိ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမရှိပါ။
တိုကျိုမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်ပထမအဆင့်ဖြစ်သင့်သည်။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း တိုကျို၌ဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြသည့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည် သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း တိုကျိုမှာ။ ပထမ ဦး စွာ ကုမ္ပဏီ၏အမည်ရရှိနိုင်မှု တိုကျိုမြို့တွင်စစ်ဆေးပြီးကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သည် သင်၏လုပ်ငန်းကိုစတင်ပါ တိုကျိုအတွက်လုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း တိုကျိုအတွက်လွယ်ကူသောဖြစ်စဉ်ကို!
ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် တိုကျိုမှာ စီးပွားရေးဘဏ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်း တိုကျိုမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်သောအခါတွင်လုပ်ရန်အရေးကြီးဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးဘဏ်အကောင့် တိုကျိုမှာမင်းကမင်းအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္playsကနေပါဝင် startup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တိုကျိုမြို့ရှိစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုခြေရာခံရန်တိုကျိုမြို့ရှိအခွန်အခများကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူစေရန်နှင့်တိုကျိုရှိသင်၏ကုမ္ပဏီလက်အောက်၌ငွေသွင်းခြင်းများကိုပြုလုပ်ရန်။
သင်ရှာနေလျှင်တိုကျိုမှ client များအတွက် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း တိုကျိုမှတိုးတက်မှုနှုန်း ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် တိုကျိုအပြင်ဘက်မှာမင်းရဲ့အဖြေကတိုကျိုအပြင်ဘက်မှာတောင်ပံတွေကိုဖြန့်ဖို့ကူညီလိမ့်မယ်။ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ တိုကျိုကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ် သင်၏နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကိုစတင်ပါ တိုကျိုကနေ။
ဖွင့်လှစ် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် တိုကျိုကနေ
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစလုပ်ပါ တိုကျိုမှာရှာကြသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်၎င်းကိုဖွင့်ရန်လွယ်ကူသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် တိုကျိုကနေ။ တိုကျိုရှိစာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်စွက်ခြင်း၊ တိုကျိုမြို့ရှိအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သင်တိုကျိုမှမည်သည့်တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုစီစဉ်နေသည်မဟုတ်ကြောင်းပြသရန်တိုကျိုရှိနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ကုန်သည်အကောင့် တိုကျိုနှင့် ငွေပေးချေမှုရမည့် Gateway မှာ တိုကျိုဘို့
eCommerce ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် တိုကျိုအတွက်, အားလုံး -In-One ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်း တိုကျိုမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ငွေပေးချေရန်တံခါးပေါက် နှင့် ကုန်သည်အကောင့် တိုကျိုမှစတင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ရှုပ်ထွေးပုံရသော်လည်းမလွယ်ကူပါ။ တိုကျိုအတွက်ငွေပေးချေရန်တံခါးပေါက်၊ တိုကျိုအတွက်ငွေပေးချေသည့်စနစ်နှင့်ကုန်သည်စာရင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ် တိုကျို - သင်တစ် ဦး လျှင် eCommerce ကုန်သည် တိုကျိုမှာ
ကျော်ဘို့တိုကျိုအတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် 170 နိုင်ငံများ
တိုကျိုရှိကုန်သည်အကောင့် - ငွေကြေး ၂၀၀ လက်ခံပါ
ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံပါ ထက်ပိုမိုထံမှတိုကျို၌ 300 ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးကိုဝယ်ပါ တိုကျိုမှ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုစတင်ပါ Tokyo.To ၌တည်၏ စီးပွားရေးစတင်ပါ တိုကျိုရှိတိုကျိုရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ယူခြင်းကိုလည်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
စီးပွားရေးရောင်းအား လူတစ်ယောက်ဟာတိုကျိုမှာကုမ္ပဏီရဲ့အစုရှယ်ယာ ၀ ယ်တာဖြစ်ဖြစ်၊
သငျ့လျြောသော ကြောင့်လုံ့လဝီရိယ တိုကျိုမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုရောင်းချခြင်းမပြုမီပြုလုပ်သင့်သည်။ ပါတီများက ၀ င်ရောက်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုသတိပြုရမည် စီးပွားရေးရောင်းချခြင်း တိုကျိုနှင့်၎င်းနောက်ကွယ်မှဥပဒေရေးရာသက်ရောက်မှုတွေ။
အကောင့်များ Outsourcing တိုကျိုမှာ
အကောင့်များ outsourcing ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်တိုကျိုရှိစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ တိုကျိုမှပေးသောငွေစာရင်းများပြင်ပ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်အားမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ရန်တိုကျိုရှိဘဏ္indicatorsာရေးညွှန်းကိန်းများကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
- စာရင်းကိုင်ဝန်ဆောင်မှု တိုကျိုမှာ
တိုကျိုမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုကျိုရှိတည်ထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင်၊ အကယ်၍ တိုကျိုမှအီးယူအတွက်ဘဏ္licensာရေးလိုင်စင်ရယူခြင်းသို့မဟုတ်တိုကျိုမှဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက်ကမ်းလွန်လိုင်စင်၊ Crypto လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ICO လိုင်စင်သို့မဟုတ်တရားစီရင်မှုအမျိုးမျိုးရှိတိုကျိုမှလောင်းကစားလိုင်စင်အတွက်လိုအပ်လျှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်း။
Virtual Number (VoIP) တိုကျိုဘို့
VoIP ကမ်းလှမ်းသောဝန်ဆောင်မှုများ ဘို့ နှစ်ခုလုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တိုကျိုနှင့်လူနေအိမ် VoIP ၌တည်၏။
Virtual နံပါတ် တိုကျိုအတွက် 89 နိုင်ငံများ | 290 အမြို့မြို့
သင်၏စီးပွားရေးကိုတိုကျို၌ဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်နေရာ၌ဖြစ်စေ၊ သင့်လုပ်ငန်းအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကောင်း တိုကျိုဒါမှမဟုတ်အခြားဘယ်နေရာမှာမဆို၊ မင်းရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှိနေခြင်းပျောက်နေတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရှိစျေးနှုန်းချိုသာသော ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ HR ကိုတိုကျို၌အမှုဆောင်ရှာဖွေပါ တိုကျိုအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများ, အခွက်တဆယ်ဝယ်ယူမှု တိုကျိုရှိဝန်ဆောင်မှုများ, စုဆောင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို outsourcing တိုကျိုမြို့ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်တိုကျိုအတွက်အလုပ်ခွင်တွင်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိသည်
တိုကျိုရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အတိုင်ပင်ခံ (HR) ပေါင်းအခမဲ့ယောဘသည် Portal ကို တိုကျိုကိုဝင်ရောက်ခွင့်
Talent Acquisition တိုကျိုမှာ
Talent Acquisition သည်အဆင့် ၃ ဆင့်ပါ ၀ င်သည့်တိုကျိုမြို့ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဘက်စုံ၊
- စုဆောင်းသည် တိုကျို၌သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
- ရွေးချယ်ပါ တိုကျို၌သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
- ဘော်ဒါတွင် တိုကျို၌သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် Talent Acquisition တိုကျိုသည်တိုကျိုမြို့တွင်ရာထူးနေရာများများရရန်ဝေးလံသော်လည်း၊ မဟာဗျူဟာအရဆွဲဆောင်ရန်၊ တိုကျိုမြို့ရှိသင်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များပြည့်မီရန်သင့်အားကူညီနိုင်မည့်တိုကျိုမှဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာမှဖြစ်စေ၊
စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် Outsourcing တိုကျိုမှာ (RPO)
ကျနော်တို့ပေး စုဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုပြင်ပ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ရန်တိုကျိုရှိ ၀ န်ဆောင်မှုကို။
RPO ပံ့ပိုးပေး တိုကျိုရှိလူအများခေါ်ယူစုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း Outsourcing သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်တိုးချဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည် HR တိုကျိုမြို့ရှိဘက်စုံငှားရမ်းဖြေရှင်းချက်ကိုပေး။ တိုကျိုမြို့ရှိ RPO ပံ့ပိုးသူသည်တိုကျိုရှိလိုအပ်သော ၀ န်ထမ်းများ၊ သင်၏စုဆောင်းမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်တိုကျို၌သင်၏အောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်သောနည်းပညာနှင့်နည်းစနစ်များကိုဖြန့်ဝေနိုင်သည်။
(ဒီတစ်ခုအဘို့ဖြစ်၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ တိုကျိုမှာတကယ်ပဲရှာဖွေနေတယ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ တိုကျိုမှာ)
အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်အကိုင်နေရာများကိုတိုကျိုတွင်အလုပ်ရှာနေသည်၊ တိုကျိုရှိအတွေ့အကြုံရှိအလုပ်များ၊ တိုကျိုရှိအလုပ်များ၊ တိုကျိုရှိအိုင်တီအလုပ်များ၊ တိုကျိုရှိအလုပ်သမားအလုပ်အကိုင်များ၊ တိုကျိုရှိလုံခြုံရေးအလုပ်များ၊ တိုကျိုရှိရောင်းအားအလုပ်များ၊ တိုကျိုရှိစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလုပ်အကိုင်များ၊ တိုကျို၊ တိုကျိုရှိရာသီအလိုက်အလုပ်သမားများ၊ တိုကျိုရှိအလုပ်အကိုင်များ၊ တိုကျိုရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ၊ တိုကျိုရှိဝဘ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအလုပ်များ၊ တိုကျိုမြို့ရှိအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုပိတ်ဆို့ခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့တိုကျိုရှိအလုပ်ရှာဖွေသည့်နေရာများရှိသည်။ ၎င်းသည်တိုကျိုနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာ ၁၀၆ ခုတွင်အလုပ်ရှာဖွေနိုင်မည့်သူကိုကူညီသည်
HR အတိုင်ပင်ခံသည်တိုကျိုမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်သောအခါတိုကျိုရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောလိုအပ်ချက်များကို တွေ့ဆုံ၍ များစွာကူညီနိုင်သည်။
လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် အတိုင်ပင်ခံ ကျွန်ုပ်တို့အားထောက်ပံ့ပေး Tokyo တွင်သင်၏ HR အခြေခံလိုအပ်ချက်များအတွက်အထူးအလုပ်ဖြစ်သော HR လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တိုကျိုမြို့တွင်လူသစ်စုဆောင်းခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
- ၁၀၅ နိုင်ငံနှင့်တိုကျို - နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံ။
အကောင်းဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ HR အလေ့အကျင့် တိုကျိုအတွက်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
အတူအတွေ့အကြုံကို စက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြား တိုကျိုမှာ
ထုတ်လုပ်သူသန်းသန်းပေးသည် အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေး တိုကျိုမြို့ရှိစီမံခန့်ခွဲရေး ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးရန်ကတိကဝတ်ဖြင့်အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တိုကျိုတွင်အကြံပေးခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည် အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေး တိုကျိုနှင့်နိုင်ငံတကာမှဒါရိုက်တာမှတိုကျိုအတွက်“ C” suite level အထိ။ သင်၏တိုကျိုကိုသင်၏လျှို့ဝှက်အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေမှုကိုအတွေ့အကြုံများစွာရှိသောတိုကျိုရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကစစ်ဆေးလိမ့်မည်။
တကယ်ပါပဲအကယ်၍ သင်သည်တိုကျို၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့လျှင်အောင်မြင်မှုနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်တိုကျိုမြို့ရှိလူသားအရင်းအမြစ်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားတိုကျိုရှိအလုပ်ရှင်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအခမဲ့ပေးသည်။
တိုကျိုရှိကျွန်ုပ်တို့၏ HR Consulting service မှတဆင့် ၀ န်ထမ်းများကိုငှားရမ်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားနိုင်သည်။
အကယ်၍ အကူအညီလိုလျှင်တိုကျိုတွင်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုကျိုရှိတည်ထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ပိုင်ရှင်ရှိပြီးဖြစ်သည် ဘဏ္licensာရေးလိုင်စင် တိုကျိုကနေ အီးယူသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်လိုင်စင် ဘို့ ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် တိုကျိုမှ Crypto ဖလှယ်ခွင့်လိုင်စင် နှင့် ICO သို့မဟုတ် လောင်းကစားလိုင်စင် အမျိုးမျိုးသောတရားစီရင်မှုအတွက်တိုကျိုကနေ။
- လုပ်ငန်းလိုင်စင် တိုကျိုကနေ
- ကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင် တိုကျိုကနေ
- ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် တိုကျိုကနေ
- Crypto Exchange လိုင်စင် တိုကျိုကနေ
- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင် တိုကျိုကနေ
- လောင်းကစားလိုင်စင် တိုကျိုကနေ
- ငွေပေးချေမှုကြားခံ တိုကျိုမှလိုင်စင်
တိုကျိုမြို့ရှိလည်ပတ်ငွေကြေးအရင်းအနှီး = တိုကျိုရှိလက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများ - တိုကျိုရှိလက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရား
ဘို့ လည်ပတ်ငွေကြေး တိုကျိုအတွက်ငွေကြေး
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဝယ်ယူ ကြွေးမြီများ၊ တိုကျိုရှိအခွန်အခများနှင့်တိုကျိုဈေးကွက်၏စျေးနှုန်းအရထိုစီးပွားရေး၏ ၀ ယ်ယူစျေးနှုန်းများကိုတိုကျို၌လုံ့လဝီရိယမရှိဘဲတိုကျိုတွင်၊ အကြံပြုသည်မဟုတ်။ ဘို့ တိုကျိုမြို့ရှိစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ Tokyo ရှိ Due Diligence နှင့်ဆက်စပ်သောသင်လုပ်နိုင်သည်။
ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေး Tokyo မှသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်အတွက်တိုကျို၌ပစ္စည်းအသစ်များအတွက် ၁၀၀% ရန်ပုံငွေခွင့်ပြုသည်
တိုကျိုရှိပစ္စည်းငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက် - ပိုသိကြ ဆက်သွယ်ရန်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလှည့်ကျအတိုင်ပင်ခံ တိုကျိုမှအမြတ်တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းတို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုပြောင်းလဲရန်တိုကျိုမှကူညီခြင်း \_ t တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ငွေသားစီးဆင်းမှုအစရှိသဖြင့်တိုကျိုရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် န်ဆောင်မှုများလှည့် စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်တိုကျိုမှာ
တိုကျိုရှိ Software ကုမ္ပဏီ
တိုကျိုမှဖောက်သည်များကိုအိုင်တီ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည်။ web development တိုကျိုမှာ eCommerce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တိုကျိုမှာ blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ တိုကျိုမှာ software development တိုကျိုမှာ မိုဘိုင်း app ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လူသိများတဲ့တိုကျိုမှာ, မိုဘိုင်း application ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တိုကျိုမှာ ဝဘ်ဒီဇိုင်း တိုကျိုမှာ၊ တိုကျိုကဒီဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
ငါတို့သည်လည်းအခမဲ့ပေး: တိုကျိုရှိ software နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ တိုကျိုရှိ Web development တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု၊ တိုကျိုရှိ Blockchain တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုနှင့်တိုကျိုမြို့ရှိ AI တိုင်ပင်ခြင်း။
တိုကျိုရှိစျေးနှုန်းချိုသာသော Web Designing Company
တိုကျိုရှိဝက်ဘ်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ တိုကျိုရှိ Client`s အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ပေးသည်မှာ Corporate, Responsive နှင့် SEO Optimized ဖြစ်သည်
တိုကျိုရှိစျေးနှုန်းချိုသာသော Web Development
တိုကျိုမြို့ရှိ Web Development Company နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အရည်အသွေး၏။
တိုကျိုရှိစျေးနှုန်းချိုသာသော App Development
351+ ကျော်သောအက်ပ်များ နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအတွက်။ တိုကျိုမြို့ရှိ App Development ကုမ္ပဏီ.
သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်တိုကျိုရှိကုန်ပစ္စည်းများ - တိုကျိုနှင့်နိုင်ငံတကာတွင်သင်၏အွန်လိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်အတွက်။
တိုကျိုရှိတတ်နိုင်သည့် Software Development
တိုကျိုမြို့ရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ ဖွံ့ဖြိုးမှု, စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် devOps များအတွက်တိုင်ပင်။
စိတ်ကြိုက် တိုကျိုရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ, မသက်ဆိုင်ဘဲမူလသင့်ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း။
တိုကျို၌လုပ်ငန်းစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုကျိုမြို့ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုးချဲ့ခြင်း၊ သင်သည်တိုကျိုမြို့ရှိရုံးခန်းတစ်လုံးသို့မဟုတ်အိမ်တစ်လုံးလိုအပ်သည်။ တိုကျိုအိမ်ခြံမြေလိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ပေါ်တယ်။ တိုကျိုရှိပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ရှင်များနှင့်သို့မဟုတ်တိုကျိုရှိအိမ်ခြံမြေပွဲစားများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
တိုကျိုမြို့ရှိအိမ်ခြံမြေတစ်ခုကိုဝယ်ယူရောင်းချခြင်း။ ငါတို့ကြိုးစားကြည့်ပါ အခမဲ့အိမ်ခြံမြေပေါ်တယ် တိုကျိုမှာ။ တိုကျိုရှိရောင်းမည့်တိုက်ခန်း
တိုကျိုမြို့ရှိတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားချင်ပါသည်။ အခမဲ့အိမ်ခြံမြေပေါ်တယ် တိုကျိုမှာ။ တိုကျိုတွင်တိုက်ခန်းငှားရန်ရှိသည်။
တိုကျိုရှိလယ်ယာမြေများကိုရှာဖွေခြင်း၊ ထပ်မံ၍ မရှာပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုကျို၏အခမဲ့အိမ်ခြံမြေစာရင်းများကိုသုံးပါ။
တိုကျိုသည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောတိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်တိုကျို၌သင်လိုချင်တာကိုရှာဖွေရန်မှာတစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုကျိုအတွက်အသုံးပြုပါ။ သင်လိုချင်သမျှ၊ သင်လိုချင်တာ!
တိုကျိုရှိ Classified Services
တိုကျိုများအတွက် Classified Portal ကို
တိုကျို၌လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါသို့မဟုတ်တိုကျို၌သင်၏လုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ပါ။ တိုကျိုရှိရုံးခန်းပရိဘောဂများ၊ တိုကျိုရှိလက်ပ်တော့များ၊ တိုကျိုရှိသင်၏တိုက်ခန်းအတွက်ပရိဘောဂများလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ တိုကျို၌သေးငယ်သောအရာများစွာရှိပါသည်။ နှင့်နိုင်ငံပေါင်း 105 ။
တိုကျိုအတွက်အခမဲ့ Classified Services
အကယ်၍ တိုကျိုသို့အသစ်ရောက်ရှိလျှင်၊ တိုကျိုရှိရုံးပရိဘောဂများကိုရှာဖွေပါ။
သင်၏စီးပွားရေးအသစ်အတွက်တိုကျိုတွင် ၀ ယ်ရန်အိုင်တီပစ္စည်းကိရိယာများကိုရှာဖွေခြင်း။
တိုကျိုရှိအိမ်သုံးစက်ပစ္စည်းများကိုတိုကျိုရှိကော်ဖီ၊ မိုက်ကရိုဝေ့ဗ် Owen ကဲ့သို့ရှာဖွေပါ။
ဥပဒေရေးရာအတွက်တိုကျိုရှိလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေကိုဆက်သွယ်ပါ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခြင်း .
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - တိုကျိုရှိ Virtual Office
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်များဖြစ်သော Virtual Office Address Tokyo တွင်စာတိုက်နှင့်ပို့စာများကိုကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့သင်လုပ်နိုင်သည် - သင်၏အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်တိုကျို၏ Virtual ရုံးအကောင့်၏ post-box settings တွင်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားရေးနာမည်နှစ်ခုလုံးကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့မှသာစာတိုက်နှင့်စာတိုက်များကို Virtual Office Address ရှိနာမည်နှစ်ခုလုံးအောက်တွင်လက်ခံရရှိနိုင်သည်။ တိုကျို။
Tokyo Virtual Office လိပ်စာသည်ကမ်းခြေရှိမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုလား။
ဖော်ပြခဲ့သောတည်နေရာအတွက်တိုကျိုရှိ Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုသည်တိုကျိုရှိကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့မှစီမံခန့်ခွဲသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာဖြစ်ပြီးတိုကျိုရှိရုံးခန်းနေရာရှိသင်၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထုပ်များကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်း။
တိုကျိုရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ | ဂျပန်ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
တိုကျိုရှိ virtual office လိပ်စာများကိုလက်ခံရရှိသည့်စာတိုက်နှင့်စာတိုက်ပုံးများကိုလိပ်စာများစွာဆီပို့လို့ရသလား။
Virtual လိပ်စာတိုကျို | ဂျပန်၌ Virtual လိပ်စာ
ကျွန်ုပ်တိုကျို၏ Virtual Office လိပ်စာသို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်၏စာပို့လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
သင်၏စာသို့မဟုတ်အထုပ်ဖြစ်စေတိုကျိုမြို့ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိပ်စာသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သူတို့သည်တိုကျိုအတွက် virtual mailbox မှတစ်ဆင့်သင့်အားဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲပြီးသင်ထံသို့အကြောင်းကြားပေးပြီးနောက်သင်ရွေးချယ်ပြီး၎င်းကိုဖွင့်ရန်၊ စကင်လုပ်ရန်၊ ထုတ်ရန်သို့မဟုတ်လွှင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအကြောင်းကြားရန်ဖြစ်သည်။
Virtual Business Address တိုကျို | Virtual Business Address ဂျပန်နိုင်ငံ
တိုကျိုရှိ Virtual Business လိပ်စာသည်ဂျပန်တွင်ရောက်ရှိလိုသောမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆိုသွားရန်ကောင်းသည်။ သင်၏တည်ရှိမှုအတွက်တိုကျိုမြို့ရှိသင်၏ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်အချိန်နှင့်ငွေအမြောက်အများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မလိုဘဲသင်၏တိုကျိုမြို့ရှိသင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးချဲ့ရန်သင့်ဆန္ဒအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
တိုကျိုရှိ Virtual ရုံးခန်း ဂျပန်ရှိ Virtual ရုံးခန်း
တိုကျိုရှိ virtual PO box အတွက်အပို ၀ န်ဆောင်မှုများ (သို့) တိုကျိုရှိ virtual mail လိပ်စာသို့မဟုတ်တိုကျိုရှိ virtual office နေရာများအတွက်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များကဘာတွေလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလွန်ပွင့်လင်းမြင်သာသောမူဝါဒနှင့်လစဉ်ကြေးရှိသည်။ သင်သည်ဂျပန်တွင် virtual mailing address သို့မဟုတ် Japan ရှိ virtual PO box သို့မဟုတ်ဂျပန်ရှိ virtual office Workspace ကိုဖော်ပြခဲ့ပြီး၎င်းကိုဂျပန်နိုင်ငံရှိ virtual office ဟုခေါ်ပြီးသင်ရွေးချယ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ စံအထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သောအပိုဝန်ဆောင်မှုများကိုမရွေးချယ်မီအခြေအနေနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုအမြဲတမ်းအသိပေးပါ။
တိုကျိုအတွက်ရုံးခန်းဖွင့်ရန်နေရာ တိုကျိုအတွက် virtual mail လိပ်စာ တိုကျိုအတွက် Virtual PO Box
ဂျပန်ရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခြားအမည်များကဘာတွေလဲ။
ဂျပန်ရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်လူတို့နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအမည်များမှာဂျပန်ရှိ virtual ရုံးများနှင့်စီးပွားရေးလိပ်စာများ၊ ဂျပန်ရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဂျပန်ရှိ digital workspace solutions, ဂျပန်ရှိ virtual office လိပ်စာ၊ ဂျပန်ရှိ virtual ရုံးများဝန်ဆောင်မှု, virtual office ဂျပန်ရှိ virtual service များ၊ ဂျပန်ရှိ virtual address service၊ ဂျပန်ရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ဂျပန်ရှိ digital digital နေရာများရှိတိုကျိုရှိ virtual office ကုမ္ပဏီ၊ ဂျပန်ရှိ virtual mailbox ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ တိုကျိုရှိ virtual office ကုမ္ပဏီများ၊ ဂျပန်တွင်ငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ တိုကျိုရှိစာပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှု၊ ဂျပန်ရှိ virtual စာတိုက်ပုံးဝန်ဆောင်မှု၊ ဂျပန်ရှိ virtual PO Box၊ ဂျပန်ရှိရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ တိုကျိုရှိစာတိုက်လိပ်စာများ။
ဂျပန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံတိုင်းသည်တိုကျိုနှင့်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာအဖြစ် virtual office ကိုအသုံးပြုရန်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ရှင်းလင်းချက်များအတွက်ထိတွေ့ရယူပါ။
တိုကျိုရှိ Virtual စာတိုက်လိပ်စာ တိုကျိုရှိ Virtual ရုံးစာတိုက်လိပ်စာ တိုကျိုမြို့ရှိစာပို့ခြင်း တိုကျိုရှိရုံးခန်းလိပ်စာ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ တိုကျိုဘို့
တိုကျိုရှိ Start-ups များအတွက်အထူးပံ့ပိုးမှု
တိုကျိုရှိ One Stop Shop
တိုကျိုမြို့ရှိ Hand Holding
တိုကျိုရှိ Client Acquisition ပံ့ပိုးမှု
ငါ millionmaker.com နှင့်အတူတိုကျိုစီးပွားရေးသတင်းအတွက်စာရင်းပေးသင့်ပါသလား။
ဘို့ နောက်ဆုံးပေါ်တိုကျိုစီးပွားရေးသတင်း စီးပွားရေးဥပဒေများတိုကျို, တိုကျိုစတင်ရန် စီးပွားရေးသတင်း, စီးပွားရေးသတင်းတိုကျို, နောက်ဆုံးပေါ်တိုကျိုစီးပွားရေးသတင်း တိုကျို, တိုကျို၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန် စီးပွားရေးဥပဒေ, တိုကျို စီးပွားရေးဥပဒေများ, စီးပွားရေးဥပဒေ တိုကျို စီးပွားရေးဥပဒေများ တိုကျို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများ တိုကျို စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်အသစ်များ တိုကျို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူး တိုကျို၊ စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်အသစ်တိုကျို၊ တိုကျို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများ, တိုကျို နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများ, နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများ တိုကျို တိုကျိုစီးပွားရေးဥပဒေသစ် နောက်ဆုံးသတင်းများ, တိုကျိုနောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများနောက်ဆုံးသတင်းများ, တိုကျိုနောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများ, နောက်ဆုံးစီးပွားရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများတိုကျို, အသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများတိုကျိုအသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်း တိုကျို, တိုကျိုစီးပွားရေးတည်ဆောက်ပုံ, အသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများတိုကျို, စီးပွားရေးဆောင်းပါးတိုကျို, တိုကျို စီးပွားရေးဆောင်းပါး, စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်တိုကျို, စတင်တည်ထောင်သည် တိုကျို စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်သစ် တိုကျို, တိုကျို စီးပွားရေးသတင်း, စီးပွားရေးသတင်း တိုကျို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်းပါးများ တိုကျို၊ တိုကျိုစီးပွားရေးဆောင်းပါးများ၊ တိုကျိုစီးပွားရေးသတင်းများ၊ တိုကျို စီးပွားရေးဆိုင်ရာမွမ်းမံမှုများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုကျိုကို update, တိုကျို စတင်တည်ထောင်သည်, တိုကျိုသတင်း၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်မည်သို့မည်ပုံတိုကျိုသတင်း၌စီးပွားရေးစတင်ရန်, တိုကျိုမြို့ရှိသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်မည်သို့မည်ပုံ, စတင်ရန်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေး တိုကျို update ကို, စီးပွားရေးအစီအစဉ် တိုကျိုသတင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း တိုကျိုအတွက်နောက်ဆုံးသတင်းများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း update ကို, အသေးစားစီးပွားရေး သတင်းတိုကျို၊ တိုကျို စီးပွားရေးသတင်း တိုကျို စီးပွားရေးဝဘ်ဆိုက် တိုကျို စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တိုကျိုမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တိုကျို၊ တိုကျိုစီးပွားရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုကျို, တိုကျိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။